Iyo inotevera vhezheni yeUbuntu ichadaidzwa kunzi Ubuntu 18.04 Bionic Beaver | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura takasangana neshanduro itsva yeUbuntu, Ubuntu 17.10, yekutanga vhezheni makore akati wandei kuve neGnome sedhiraivhodhi huru. Ubuntu haisati yashandura nzira yayo yekuvandudza software uye mushure memazuva mashoma neiyo yekutanga furor, timu inodzoka mukuvandudza kweinotevera yakagadzikana vhezheni.
Sezvo nekuburitswa kwese, Mark Shuttleworth, Canonical CEO uye mutungamiri weUbuntu, anotangisa zita remadunhurirwa rekuti kuburitswa kunotevera. Mune ino kesi, iyi vhezheni ichave LTS, ndokuti, Rutsigiro rurefu. Ubuntu 18.04 Bionic Beaver ichave iri inotevera vhezheni yeUbuntu, sekutaura kwaShuttleworth.
Iyi vhezheni yakakosha nekuti haizove chete inotevera LTS vhezheni yeUbuntu asiwo Ichave mutero mudiki kune vese avo vanogadzira, vanogadzira zvinyorwa, beta testers, vashanduri, nezvimwe ... izvo zvakagadzira Ubuntu zvazviri nhasi: imwe yeanonyanyo shandiswa uye anozivikanwa ekuparadzira Gnu / Linux mupasi rose.
Bionic Beaver ichavhurwa inotevera Kubvumbi 26, maererano nekarenda yakasimbiswa uye ichatanga kukura muna Gumiguru 26. Munguva yemwedzi waNdira tichava neyekutanga Alpha vhezheni uye munaKurume yekupedzisira beta vhezheni ichaburitswa pamberi peiyo yekupedzisira vhezheni.
Ubuntu 18.04 Bionic Beaver inosvika kuzvikwata zvedu muna Kubvumbi 26
Ubuntu 18.04 Bionic Beaver basa richava rakaoma uye rakareba, pamwe ndiyo yekutanga vhezheni isingabude zvinoenderana neyakagadzwa hurongwa sezvo ichave iri vhezheni neGnome sedesktop uye iine akawanda mabugs uye asina kugadziriswa matambudziko eUbuntu 17.10.
Zvakare zvinogona Ubuntu ine hutsva hutsva hwepamutemo panguva iyoyo, Ubuntu neYunit kana Kubatana se desktop huru. Iyo flavour ingangoitirwa vashandisi vanoda iyo yekare Ubuntu desktop, asi hapana chakasimbiswa kana kuramba pamusoro peizvi.
Chero zvazvingaitika, Ubuntu iri kuenda kumberi uye iine chirongwa chikuru chinokanganisa kwete chete vashandisi veUbuntu asiwo mamwe mapurojekiti ekuparadzira anoshandisa Ubuntu sekuparadzira base.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo inotevera vhezheni yeUbuntu ichadaidzwa kunzi Ubuntu 18.04 Bionic Beaver